China Hotel Girazi Door Kubata Minibar M-25T Kugadzira uye Fekitori | AOLGA
Hotera Girazi Musu Kubata Minibar M-25T
Hunhu, mutengo, dhizaini uye chengetedzo ndiwo mazwi akakosha eiyo Absorption Minibar M-25T
Inofungidzirwa sekubatsira semafriji madiki, mini-mabhaisheni anobatsira kuchengetedza zvigadzirwa uye zvinwiwa zvinotonhorera.
Aya mafiriji mini-bar anoiswa muhotera kamuri kana muhofisi.
Kubvisa Minibar M-25T inoisa mabhenji matsva mukunyaradza kwevaeni, chigadzirwa chigadzirwa uye kugona kwesimba. Ichisanganisira tekinoroji yekutsvaira isina mutsindo yaMdesafe, iyo 25 l kirasi minibar firiji yakanyarara chose mukushanda uye nehupfumi, futi. Gonhi rayo regirazi uye mwenje wemwenje ye LED zvakanyatsosimbisa iyo minibar iri kupa kusimudzira kutengesa kwako. Inesarudzo kukwidziridzwa: mubato wemusuwo, kukiya, kuruboshwe-ruoko-ruoko hinji, LED yekuvhura musuwo kudzora.
Kutonhora Nzira: Absorption matekinoroji, ammonia denderedzwa remvura
1.Minibar ndiyo imwe yezvigadzirwa zvine hushamwari zvakatipoteredza, zvisina fluorine, uye zvinokonzeresa kusvibiswa kune aerosphere. Kuita kwepamusoro nekukwirisa kwepamusoro tekinoroji nyowani uye kutonhora neammonia.
2.Minibar haina kana compressor, hapana fan, hapana chikamu chinofamba, hapana Freon, hapana vibration, yakanyarara uye haiburitse chero ruzha, inoshanda mushe uye zvine mutsindo. Zvigadzirwa zvinokwanisa kudzikisira otomatiki uye ndezve mafiriji anotonhorera.
3.Iye zvigadzirwa zvinogamuchira zvemagetsi tembiricha kudzora, izvo zvinoita kuti tembiricha mune chigadzirwa.
4.Kunyange kunyangwe, uye nekuchinja kushoma paunotanga nekuvhara.
5.Mikova mahinji eiyo chigadzirwa akasiyiwa-uye-kurudyi achichinjika.
6.Kuchengetedza-kwemahara mashandiro, kuchengetedza simba, hupenyu hwakareba uye makore mashanu 'garandi.
1.Kuboshwe kana kurudyi kuvhura
2.Color (Dema, Chena, nezvimwewo)
3.Suo rakasimba kana gonhi regirazi
4.Print mutengi logo
5.Power plug mhando, Semuenzaniso, Spain mhando, New Zealand mhando, USA mhando, Europe mhando nezvimwe.
7.AC kana DC
8.Shelving inogona kugadzirisa kuti iwane yakatarwa yekuchengetedza
Imba yevaeni imba, Hofisi, Chipatara kana Imba nezvimwe.
Mashandisiro Ekuraira kweKutora Hotel Mini bhawa:
1. Ndokumbirawo kuti chigadzirwa chishande rinenge 1 awa risina mutoro, wozoisa muzvikafu kana uchishandisa chigadzirwa kekutanga.
2. Chigadzirwa chinomira chakatwasuka uye hachikwanisi kusvetwa; kana zvisina kudaro zvinokonzeresa kutonhora.
3. Kune zvachose nzvimbo shanu mumudziyo wekugadzirisa tembiricha, kazhinji ndapota shandisa chinzvimbo Position 1 ndiyo inonyanya kudziya nepo nzvimbo 5 iri inotonhorera.
4. Usaise chikafu chakawandisa mukabati kamwe, ndapota wedzera chikafu zvishoma nezvishoma.
5. Imwe nhanho inofanirwa kuchengetwa pakati pechikafu chakachengetwa mudare, kuitira kuti mhepo inotonhorera ifambe zvakasununguka uye tembiricha ive yakafanana.
6. Kuti uchengetedze simba, ndapota edza nepaunogona napo kudzikisa nguva dzekuvhura madhoo pamwe nekuita kuti ikurumidze pese paunovhura musuwo.
7. Paunorega kushandisa, ndapota shandisa jira nyoro nyoro kuchenesa mukati mekikuni, uye rega mweya utenderere mumubhobho kuitira kudzivirira denderedzwa rekiki rinokanganiswa.
8.Chiedza che LED, 3.6V / 1W.
Kubvisa Kutonhora Sisitimu
Voltage / Kakawanda
220-240V (110V Zvingakudetsera) / 50-60Hz
Pashure: Hotel Kubvisa Minibar M-25A
Zvadaro: Hotel Kubvisa Minibar M-30A
A. Nguva yekuendesa yakasiyana yemuenzaniso uye kuraira kwakawanda. Kazhinji, zvinotora 1 kusvika mazuva manomwe emasampuli uye mazuva makumi matatu nemashanu ekuraira kwakawanda. Asi zvese mune zvese, yakatungamira nguva yekutungamira inofanirwa kubva pane mwaka wekugadzira uye kuwanda kwehuwandu.
girazi remukova girazi
girazi musuo minibar
Hotel Kubvisa Minibar
Hotera Dhirowa Minibar M ...
Hotera Kubvisa Minib ...
Hotera Girazi Musuwo Absor ...
Hotera uye Kumba Kushandisa Abs ...